Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - Inona no vakina manaraka
Maro amin'ireo lohahevitra ao amin'ity toko ity dia naverina ihany koa tamin'ny adiresy filoham-pirenena vao haingana tao amin'ny Fikambanana Amerikanina Momba ny Fampatsaram-Bahoaka (AAPOR), toy ny an'i Dillman (2002) , Newport (2011) , Santos (2014) , ary Link (2015) .
Ho fanampim-pahalalana bebe kokoa momba ny fahasamihafana eo amin'ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana lalina dia jereo ny Small (2009) . Ny fifanakalozan-kevitra lalina dia ny fianakaviana misy fomba amam-panao antsoina hoe ethnography. Ao amin'ny fikarohana ara-grika, ny mpikaroka dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny mpandray anjara amin'ny tontolo voajanahary. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fahasamihafana eo amin'ny ethnography sy ny fanadihadiana lalina, jereo Jerolmack and Khan (2014) . Raha mila fanampim-pahalalana bebe kokoa momba ny ethnography dia jereo ny Pink et al. (2015) .
Ny famaritako ny tantaran'ny fanadihadiana dia fohy loatra raha hampiditra ny maro amin'ireo fivoaran-javatra mampientanentana nitranga. Raha mila fanazavana bebe kokoa, jereo ny Smith (1976) , Converse (1987) , ary Igo (2008) . Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny fanadihadiana dia jereo Groves (2011) sy Dillman, Smyth, and Christian (2008) (izay mampivadika ny vanim-potoana telo hafa kely).
Groves and Kahn (1979) manolotra teboka eo amin'ny tetezamita manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny fanadihadiana amin'ny alalan'ny fanadihadiana an-doha amin'ny antsipirihany eo amin'ny fanadihadiana mivantana sy an-telefaona. ( ??? ) mijery ny fampandrosoana ara-tantara ny fomba fametrahana tsipika mahazatra.
Ho an'ny maro hafa ny fiovana ny fanadihadiana tamin'ny lasa teo amin'ny fiovan'ny fiarahamonina, jereo ny Tourangeau (2004) , ( ??? ) , ary Couper (2011) .
Mangataka andinin-tsoratra (fizarana 3.2)
Ny tanjaka sy ny fahalemen'ny fangatahana sy ny fandinihana dia niadian-kevitra tamin'ny psikology (eg, Baumeister, Vohs, and Funder (2007) ) ary ny sosiology (eg Jerolmack and Khan (2014) , Maynard (2014) , Cerulo (2014) , Vaisey (2014) , Jerolmack and Khan (2014) ] Ny fahasamihafana eo amin'ny Jerolmack and Khan (2014) fijerena ihany koa dia Jerolmack and Khan (2014) eo amin'ny toekarena, izay Jerolmack and Khan (2014) fanehoana azy ireo. Ohatra, ny mpikaroka iray dia afaka manontany azy raha te hihinana gilasy na handeha hivoaka ny gym (na tsia), na afaka mahita ny habetsahan'ny olona mihinana gilasy ary mandeha any amin'ny toeram-pisakafoanana (fialam-boly azo jerena). Misy fisalasalana lalina momba ny karazana filazam-peo voalaza ao amin'ny toekarena araka izay voalaza ao amin'ny Hausman (2012) .
Ny lohahevitra fototra avy amin'ireny adihevitra ireny dia ny fitondran-tena tsy fantatra dia tsy marina foana. Kanefa, araka ny voalaza ao amin'ny toko faha-2, loharanom-baovao lehibe dia mety tsy ho marina, mety tsy voavory amin'ny lohahevitra mahaliana azy ireo, ary mety tsy ho azon'ny mpikaroka izy ireo. Araka izany, heveriko fa, amin'ny toe-javatra sasany, ny fitondran-tena azo ampiharina. Ankoatra izay, ny lohahevitra fototra faharoa amin'ity adihevitra ity dia ny tsy fahitana ny tatitra momba ny fihetseham-po, ny fahalalana, ny zavatra andrasana ary ny hevitra. Raha ilaina anefa ny fampahalalana momba ireo fanjakana anatiny ireo, dia ny mpikaroka no manampy azy hanazava ny fitondran-tena sasany na ny zavatra hazava-ary ny fangatahana mety dia mety. Mazava ho azy, ny fianarana momba ny fanjakana anatiny amin'ny fametrahana fanontaniana dia mety ho olana satria matetika ireo mpanadihady no tsy mahatsapa ny fanjakana anatiny (Nisbett and Wilson 1977) .
Famakiana fikarohana tanteraka (fizarana 3.3)
Ny toko faha-1 amin'ny Groves (2004) manao asa tsara dia mampihetsi-po ny fitenenana mampiavaka ny mpampiasa mpikaroka amin'ny fanadihadiana mba hamariparitra ny rafitra fanadihadiana tanteraka. Ho an'ny fitsaboana boky amin'ny lava-pandrefesana ny fandinihan-draharaha diso, dia jereo ny Groves et al. (2009) , ary ho an'ny fanadihadiana ara-tantara dia jereo ny Groves and Lyberg (2010) .
Ny fiheverana ny fametrahana diso ao anatin'ny fitongilanana sy ny disadisa dia tonga amin'ny fianarana milina; Jereo, ohatra, fizarana 7.3 amin'i Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) . Izany matetika no mitarika ireo mpikaroka hiresaka momba ny fivarotana "manavakavaka".
Amin'ny resaka fisoloana, ny fampidirana goavana amin'ny olana tsy mitombina sy ny tsy fitongilanana dia ny tatitra navoakan'ny Filankevitry ny Firaisam-pirenena tsy resy lahatra amin'ny fanadihadiana ara-tsosialy sosialy: fandaharanasa fikarohana (2013) . Bilaogy mahasoa hafa koa dia omen'ny Groves (2006) . Ankoatra izay dia navoaka tamin'ny lohahevitry ny tsy famaliana ny lohahevitra manokana ao amin'ny Gazetin'ny Gazetim-panjakana momba ny statistika , ny fanehoan-kevitry ny besinimaro , ary ny tantaram-panaon'ny Akademia Amerikana momba ny politika sy sosialy . Farany, misy ny fomba maro isan-karazany amin'ny fanatrarana ny tahan'ny fandraisana andraikitra; Ireo fomba fijery ireo dia voatazona amin'ny an-tsipirihany ao amin'ny tatitra nataon'ny The American Association of Researchers (Public opinion) (AAPOR) ( ??? ) .
Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fitsapan-kevitra momba ny literatiora 1936 dia jereo ny Bryson (1976) , Squire (1988) , Cahalan (1989) , ary Lusinchi (2012) . Ho an'ny adihevitra iray hafa momba ity fitsapan-kevitra ity ho fampitandremana fanoharana momba ny fanangonana angona angona, jereo ny Gayo-Avello (2011) . Tamin'ny 1936, George Gallup dia nampiasa karazana famolavolana maromaro kokoa ary afaka namorona tombanana azo tsoahina amin'ny ohatroka kely kokoa. Ny fahombiazan'i Gallup momba ny Literary Digest dia dingana iray manan-danja amin'ny fampivoarana ny fikarohana momba ny fanadihadiana araka izay voafaritra ao amin'ny toko faha-3 amin'ny @ converse_survey_1987; toko 4 an'ny Ohmer (2006) ; ary toko faha-3 amin'ny @ igo_averaged_2008.
Raha mikasika ny famafazana, loharanom-baovao iray lehibe ho an'ny famolavolana fanontaniana ny Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) dia Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) . Ho an'ny fitsaboana bebe kokoa dia jereo ny Schuman and Presser (1996) , izay mifantoka manokana amin'ny fanontaniana mikasika ny toe-tsaina, ary ny Saris and Gallhofer (2014) , izay ankapobeny. Ny fomba fitoviana kely amin'ny fitomboana dia nalaina tao amin'ny psychometrics, araka ny voalaza ao amin'ny ( ??? ) . Ny fisiana pretesting dia misy ao amin'ny Presser and Blair (1994) , Presser et al. (2004) , ary ny toko faha-8 amin'ny Groves et al. (2009) . Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanadihadiana, jereo Mutz (2011) .
Raha ny fandaniana dia ny Groves (2004) ara-kolontsaina sy lafo momba ny fividianana ny vidin'ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana diso.
Iza no hangataka (fizarana 3.4)
Ny fomba roa karazana boky lavalava momba ny fandaharam-potoana azo tsoahina sy ny fanombantombana dia Lohr (2009) (fampidiran-dàlana kokoa) sy Särndal, Swensson, and Wretman (2003) (avoavo kokoa). Ny fomba fitsaboana tranainy amin'ny Särndal and Lundström (2005) dia ny Särndal and Lundström (2005) . Amin'ny toe-java-misy sasany amin'ny aterineto, dia fantatry ny mpikaroka momba ny tsy fitoviana, izay matetika no tsy marina tamin'ny lasa. Ny endrika tsy mitovy amin'ny fanovàna dia azo atao raha misy mpikaroka no manana fanazavana momba ny nonrespondents, araka ny nilazan'i Kalton and Flores-Cervantes (2003) ary Smith (2011) .
Ny fikarohana Xbox nataon'i W. Wang et al. (2015) mampiasa teknika iray antsoina hoe multilevel regression sy post-stratification ("Mr. P.") izay ahafahan'ny mpikaroka maminavina ny vondrona midika na dia misy maro aza. Na dia misy adihevitra sasantsasany momba ny kalitaon'ny tombanana avy amin'ity fomba fiasa ity, dia toa sahala amin'ny faritra manan-danja hitrandrahana izany. Ny teknika dia nampiasaina voalohany tao Park, Gelman, and Bafumi (2004) , ary nisy ny fampiasana sy ny adihevitra manaraka (Gelman 2007; Lax and Phillips 2009; Pacheco 2011; Buttice and Highton 2013; Toshkov 2015) . Raha mila fanampim-panazavana momba ny fifandraisan'ny vatakely sy ny lanjan'ny gropy, dia jereo ny Gelman (2007) .
Ho an'ny fomba hafa amin'ny fanombanana ny fanadihadiana ao amin'ny tranokala, jereo Schonlau et al. (2009) , Bethlehem (2010) , ary Valliant and Dever (2011) . Afaka mampiasa ny fakan-tsarimihetsika azo tsapain-tanana na ny famandrihana tsy fahita firy ny online panels. Raha mila fanampim-panazavana amin'ny sehatra an-tserasera, jereo ny Callegaro et al. (2014) .
Indraindray, ireo mpikaroka dia nahatsikaritra fa ny tombontsoa azo avy amin'ny samples sy ny problema tsy azo isafidianana dia manome tombony amin'ny kalitao mitovy (Ansolabehere and Schaffner 2014) , saingy ny fampitahana hafa dia mahita fa tsy azo atao ny mamaritra ny samples (Malhotra and Krosnick 2007; Yeager et al. 2011) . Ny antony iray mety ho an'ireny fahasamihafana ireny dia ny tsy fahombiazan'ny samples tamin'ny fotoana. Ho an'ny fomba fijery miavaka kokoa amin'ny fomba fitiliana tsy fahita firy dia mahita ny AAPOR Task Force momba ny sampling tsy misy azo antoka (Baker et al. 2013) , ary manoro hevitra ihany koa aho ny hamaky ny fanehoan-kevitra manaraka ny tatitra miverimberina.
Ahoana no hangatahana (fizarana 3.5)
Conrad and Schober (2008) dia volavolan-dahatsary mitondra ny lohateny hoe Envisioning Interview of the future , ary manome fomba fijery samihafa momba ny hoavin'ny fametrahana fanontaniana. Couper (2011) miresaka lohahevitra toy izany, ary Schober et al. (2015) manolotra ohatra tsara momba ny fomba fiasa fanangonana data izay mifanaraka amin'ny toerana vaovao dia mety hitondra vokatra avo lenta kokoa. Schober and Conrad (2015) manolotra adihevitra misimisy kokoa momba ny fanitsiana ny fizotran'ny fanadihadiana mba hifanaraka amin'ny fiovan'ny fiaraha-monina.
Tourangeau and Yan (2007) mamerina mijery ireo olana ateraky ny tombontsoa ara-tsosialy amin'ny fanontaniana manahirana, ary i Lind et al. (2013) manolotra antony sasany mety havoakan'ny olona ho fampahalalana misimisy kokoa amin'ny resadresaka fanaraha-maso amin'ny solosaina. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny andraikitry ny mpitsidika olombelona amin'ny fitomboan'ny tahan'ny fandraisana anjara amin'ny fanadihadiana, jereo ny Maynard and Schaeffer (1997) , Maynard, Freese, and Schaeffer (2010) , Conrad et al. (2013) , ary Schaeffer et al. (2013) . Ho fanampim- Dillman, Smyth, and Christian (2014) bebe kokoa momba ny fanadihadiana mifangaro, dia jereo Dillman, Smyth, and Christian (2014) .
Stone et al. (2007) manolotra fitaratry ny boky momba ny fitrandrahana ara-tontolo iainana sy ny fomba fiasa mifandraika amin'izany.
Ho an'ny toro-hevitra bebe kokoa momba ny fanadihadiana ny traikefa nahafinaritra sy sarobidy ho an'ny mpandray anjara, jereo ny asa amin'ny Tailored Design Method (Dillman, Smyth, and Christian 2014) . Ho an'ny ohatra hafa mahaliana amin'ny fampiasana fampiasa Facebook ho an'ny fanadihadiana siantifika sosialy, jereo ny Bail (2015) .
Fanadihadiana mifandraika amin'ny loharanom-baovao lehibe (fizarana 3.6)
Judson (2007) manoritsoritra ny fizotran'ny fanangonana ny fanadihadiana sy ny angon-drakitra momba ny fitantanana ho "fampidirana ny fampahalalam-baovao" ary miresaka momba ny tombontsoa sasany amin'ity fomba fiasa ity, ary manome ohatra sasantsasany.
Raha momba ny fangatahana nangatahina dia maro ireo fikasana teo aloha mba hanamarina ny fifidianana. Ho an'ity boky ity, jereo Belli et al. (1999) , Ansolabehere and Hersh (2012) , Hanmer, Banks, and White (2014) , Berent, Krosnick, and Lupia (2016) . Jereo ny Berent, Krosnick, and Lupia (2016) noho ny fisalasalana misimisy kokoa ny vokatra hita ao amin'ny Ansolabehere and Hersh (2012) .
Zava-dehibe ny manamarika fa na dia nanentana ny kalitaon'ny angona avy amin'ny Catalist aza i Ansolabehere sy Hersh, dia tsy dia mavitrika loatra ny fanombanana ny mpivarotra ara-barotra. Pasek et al. (2014) nahita ny tsy fahampian-tsakafo rehefa nampitahaina tamin'ny antontan-taratasin'ny mpanjifa ny angona avy amin'ny fanadihadihana iray avy amin'ny kaomisera Marketing Systems (izay nampitambatra ny angona avy amin'ny mpamatsy telo: Acxiom, Experian, ary InfoUSA). Izany hoe, ny tahirin-drakitra dia tsy mifanandrify amin'ireo valim-panadihadiana izay nantenaina fa tokony ho marina ny mpikaroka, ny tahiry momba ny mpanjifa dia tsy nahitana ny angon-drakitra ho an'ny fanontaniana marobe, ary ny lamin'asa tsy hita popoka dia mifandraika amin'ny valin'ny fanadihadiana (amin'ny teny hafa, Data dia rafitra, fa tsy random).
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny fanadihadiana sy ny antontam-pitantanana dia jereo ny Sakshaug and Kreuter (2012) ary Schnell (2013) . Raha mila fanazavana bebe kokoa amin'ny ankapobeny, jereo Dunn (1946) sy Fellegi and Sunter (1969) (tantara) ary Larsen and Winkler (2014) (maoderina). Ny fomba fitoviana toy izany koa dia novolavolaina tao amin'ny sehatry ny solosaina tamin'ny anarana toy ny deduplication data, famantarana ny anarana, anarana mifandraika, fitadiavana dika mitovy, ary dika mitovy ny fisavana (Elmagarmid, Ipeirotis, and Verykios 2007) . Misy ihany koa ny fomba fitehirizana manokana momba ny tsiambaratelo mba hitahirizana ny fifandraisana izay tsy mitaky ny fampitaovana vaovao (Schnell 2013) . Ny mpikaroka ao amin'ny Facebook dia nanangana dingana iray mba hampifandraisana ny firaketana an-tsoratry ny firaketana an-tsoratra amin'ny fifidianana (Jones et al. 2013) ; Ity fifandraisana ity dia natao hanombanana ny fanandramana iray izay holazaiko anareo ao amin'ny toko faha-4 (Bond et al. 2012) . Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fandeferana amin'ny fifandraisana an-tsoratra dia jereo ny Sakshaug et al. (2012) .
Ohatra iray hafa amin'ny fampidirana fanadihadiana ara-tsosialy goavana amin'ny rejisitra governemanta ao amin'ny governemanta dia avy amin'ny Health and Retirement Survey sy ny Social Security Administration. Ho an'ny maro hafa momba io fandalinana io, dia jereo ny Olson (1996, 1999) momba ny fizotran'ny fankatoavana.
Ny fizotran'ny fampifandraisana loharanom-bokim-panjakana maro ho an'ny drafitra maoderina - ny dingana ampiasain'ny katalista - dia mahazatra ao amin'ny birao statistika an'ny governemanta sasany. Mpikaroka roa avy ao amin'ny Statistics Sweden no nanoratra boky an-tsoratra momba ny lohahevitra (Wallgren and Wallgren 2007) . Ho an'ny ohatra mikasika io fomba fanao io any amin'ny faritra iray any Etazonia (Olmsted County, Minnesota, home of the Clinic of Mayo), jereo ny Sauver et al. (2011) . Raha te-hahalala bebe kokoa momba ny fahadisoana mety ho hita ao amin'ny rakitra ara-panjakana, jereo ny Groen (2012) .
Ny fomba iray hafa ahafahan'ny mpikaroka mampiasa loharanom-kaonty lehibe amin'ny fanadihadiana ny fanadihadiana dia toy ny fakantsary ho an'ny olona manana toetra manokana. Mampalahelo fa ity fomba ity dia afaka manangana fanontaniana mifandraika amin'ny fiainana manokana (Beskow, Sandler, and Weinberger 2006) .
Raha momba ny fanamafisana ny fangatahana, ity fomba ity dia tsy vaovao tahaka ny mety hiseho amin'ny fomba nilazako azy. Izy io dia manana fifandraisana lalina amin'ireo sehatra telo lehibe misy ny antontan'isa: taranja tora-pasika (Little 1993) , fanombatombanana (Rubin 2004) , ary tombanana madinika (Rao and Molina 2015) . Mifandray ihany koa amin'ny fampiasana ireo variables mpanara-maso amin'ny fikarohana ara-pitsaboana (Pepe 1992) .
Ny sandan'ny vola sy ny ora ao amin'ny Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) manondro bebe kokoa ny vidin'ny fari-pahaizana - ny vidin'ny fanadihadiana iray fanampiny - ary tsy misy ny fandaniana mifototra toy ny vidin'ny fanadiovana sy fanodinana ny angona antso. Amin'ny ankapobeny, ny fanamafisana ny fanamafisana dia mety manana faratampony avo lenta sy lozam-pifamoivoizana kely mitovy amin'ny an'ny experienta dizitaly (jereo ny toko 4). Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny finday any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana, jereo ny Dabalen et al. (2016) .
Ho an'ny soso-kevitra momba ny fanatsarana ny fangatahana tsaratsara kokoa, azoko atao ny mianatra bebe kokoa momba ny imputation maro (Rubin 2004) . Na koa, raha toa ny mpikaroka manatsara ny fangatahana fikarakarana ny isan'ireo singa, fa tsy ny toetra maha-olona azy, dia mety ho ilaina ny fomba fitenin'ny King and Lu (2008) sy Hopkins and King (2010) . Farany, raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny masinina ao Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) , dia jereo ny James et al. (2013) (fampidiran-dàlana kokoa) na Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) (ambony kokoa).
Ny olana iray momba ny fitsipika momba ny fanamafisana ny fangatahana dia ny hampiasana azy hampiditra toetra mahatsikaiky izay mety tsy hipoitra amin'ny fanadihadiana araka ny voalaza tao Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) .